Klub boky avokoa no nanombohany.
Ie, matotra aho. Nanomboka ny asako tamin'ny tranonkala aho efa roapolo taona lasa izay. Ny tranokalako voalohany dia tranokala antsoina hoe Helping Hand izay nitahiry ireo tranonkala tsara indrindra avy amin'ny tranonkala mba hanampiana ny olona amin'ny solosain'izy ireo sy amin'ny loharano fitetezana loharano amin'ny Internet. Taona maro taty aoriana dia namidiko ilay sehatra tamin'ny orinasa iray izay nanampy ny olona hiala amin'ny sigara, iray amin'ireo voalohany lehibe fifanarahana.
Nanomboka nibilaogy tamin'ny bilaogera aho ary nanamboatra tononkalo momba ny zavatra rehetra manomboka amin'ny politika ka hatramin'ny fitaovan'ny Internet. Tany amin'ny toerana rehetra aho ary nanoratra ho an'ny tenako manokana - tsy nisy mpijery firy. Izaho dia tao amin'ny klioban'ny Book Marketing any Indianapolis izay nitombo haingana tsy voafehy. Rehefa nandeha ny fotoana dia hitako fa mihabetsaka ny vondrona tonga manatona ahy hanome torohevitra momba ny teknolojia. Ny fampifangaroana ny haitao misy ahy sy ny asa aman-draharahako ary ny haitao amin'ny varotra dia notakiana be satria ny Internet dia nitondra fanovana haingana teo amin'ny indostria.
Rehefa avy namaky Resadresaka mitanjaka, Voatosika hamorona marika tsara kokoa sy hifehy ny atiny ao amin'ilay tranonkala aho. Te hanana fifehezana bebe kokoa momba ny endrika sy ny fahatsapana ato amin'ny bilaogiko koa aho, ka nifindra tany amin'ny fari-dohako, dknewmedia.com, tamin'ny 2006 ary nanangana ny tranokala WordPress voalohany. Hatramin'ny nifantohako tamin'ny haitao ara-barotra dia tsy tiako ny hanelingelina ilay sehatra misy ny anarako, ka nafindrako tamin'ny tranokala vaovao ilay tranokala (2008) izay nitomboany hatrizay.
The Martech Zone tompon'ny sy tantanan'i DK New Media, masoivoho iray natomboko tamin'ny taona 2009. Rehefa avy niara-niasa tamin'ny sahan'asa lehibe rehetra amin'ny varotra an-tserasera aho nandritra ny fotoana niasako tao amin'ny ExactTarget sy ny fandefasana famintinana, Fantatro fa be ny fangatahana ny fahaizako sy ny fitarihako ao anatin'ny orinasa sarotra toy izany.
DK New Media dia ny orinasako manokana manara-maso ny famoahana, podcast, atrikasa, webinar ary gig gig miteny. Highbridge dia ahy ny Masoivohon'ny mpivarotra Salesforce izay manampy ny orinasa hampitombo ny fampiasam-bolany amin'ny vokatra Salesforce sy Marketing Cloud. Manolotra fampidirana, fifindra-monina, fanofanana, toro-hevitra stratejika ary fampandrosoana manokana izahay.
Misaotra betsaka tamin'ny fanohananao nandritra ny taona maro!
The Martech Zone dia natolotry ny Flywheel mitantana fampiantranoana WordPress ary mpiara-miasa izahay.